ဇနီးကျင့်ဝတ် (၅) ပါး | မေတ္တာရိပ်
← ခင်ပွန်းကျင့်ဝတ် (၅)ပါး
ဇနီးကျင့်ဝတ် (၅) ပါး	Posted on April 24, 2013	by mettayate အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊
ပျင်းရိမမူ၊ ၀တ်ငါးဆူ၊ အိမ်သူ ကျင့်အပ်စွာ။
(၁) အိမ်တွင်းအမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စီမံခြင်း၊
(၂) ခင်ပွန်းအပ်နှင်းသော ဥစ္စာပစ္စည်းများကို စနစ်တကျ သေသေချာချာ သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊
(၃) မိမိခင်ပွန်းမှတပါး အခြားယောကျာ်းများနှင့် မဖောက်ပြန် မမှားယွင်းခြင်း၊
(၄) မိမိဘက်ဆွေမျိုး၊ ခင်ပွန်းဘက်ဆွေမျိုးများကို မျှမျှတတ ဝေငှပေးကမ်းခြင်း၊
(၅) လုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန် မပျင်းရိဘဲ လုံ့လ၀ီရိယရှိခြင်း။
This entry was posted in လောကနိတိ. Bookmark the permalink.	← ခင်ပွန်းကျင့်ဝတ် (၅)ပါး